आफुलाई पक्राउ गर्ने खबर पाएपछि झन आगो भइन् रामकुमारी झाक्री, दिइन् यस्तो चेतावनी – Gazabkonews
काठमाडौं । राष्ट्रपति विरुद्ध दिएको अभिब्यक्तिका कारण आलोचित बनेकी आन्दोलनरत नेकपाकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ । आफुलाई पक्राउ गर्ने कुरा थाहा पाएपछि नेता झाँक्री थप आगो भएकी छन् । उनले सेतो साडीको कुरा सांकेतिक भएको बताउँदै आफुले सत्य बोलेको दावी गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा (ओली समूह) को अखिल नेपाल महिला संघले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर झाँक्रीमाथि कारवाहीको माग गरेको थियो। सरकारको निर्देशन पछि प्रहरीले उनलाई निगरानीमा राखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनी काठमाडौ बाहिर भएकाले काठमाडौ आउना साथ पक्राउ गर्ने संकेत प्रहरीले गरेको छ ।
बाग्लुङमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले सेती साडीको कुरा सांकेतिक भएको स्पष्टिकरण दिइन्। ‘सेतो साडीको कुरा गर्दा राष्ट्रपतिको अस्मिताको अपमान भयो भन्ने ओली कम्पनीको महिला संघले बैतडीकी भागरथी भट्टको घटना किन देखेन ? उनले प्रतिप्रश्न गरेकी छन् । भागरथी र निर्मला घटनामा किन गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएन ? उनको भनाई थियो ।
झाँक्रीले थपिन्, ‘सेतो साडीको कुरा सांकेतिक कुरा हो। जसले गलत कुराको सुरुवात गर्‍यो त्यसले अहिले गलत नतिजा दिएको छ। यसमा कुनै कुरा असभ्य छैन।’ झाँक्रीले आफूले गलत प्रवृत्तिको विरोध गरेको भन्दै कार्यकारी अधिकार चाहिए चुनावमा आउन राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिइन्।